Kukhalwa ngothisha othandana nabafundi - Ilanga News
Home Izindaba Kukhalwa ngothisha othandana nabafundi
Kukhalwa ngothisha othandana nabafundi
Kuthiwa uma sezimfuna, ziyahayiza
BAKHALA bayazithulisa abazali bezi-ngane ezifunda eVusumuzi High, Kwa-Sithebe eMandeni, ngothisha osolwa ngokuthandana nezingane zamantombazane ezifunda kulesi sikole, okubikwa ukuthi ukipite nomunye umfundi ofunda eLambothi High School, isikole esiselokishini lakule ndawo. ILANGA lihambele abazali abathathu abakhala ngalo thisha abathi sebekwenze konke okusemandleni abo ukuthola usizo ukuba akhuzwe kulo mkhuba wakhe ngoba wona ikusasa lezingane zabo. Lo thisha uneminyaka engu-52, kuthiwa uthandana nabafundi kusukela besafika ku-Grade 8, abanye baze balwe ezikoleni bebanga yena. Ngokuthola kweLANGA ngabazali abahlukene, sekunesikhathi eside bezama ukuthola usizo ngalo thisha kodwa kungenzeki lutho.
Laba bazali bathi basola ukuthi lo thisha usebenzisela izingane amakhambi esintu, ngoba uma sezimfuna kuthiwa ziyahayiza zizibhonqe phansi kube sengathi ziphonswe ngezizwe. ILANGA lihambele endaweni yaKwaNoyaka, ngaphandle kwelokishi KwaChappies, lapho omunye umzali wentombazane eseyize yaba neminyaka engu-21, eveze ukuthi uqale ukukhuluma ngalolu daba ngo-2017, indodakazi yakhe isafunda uGrade 8 kulesi sikole. “Kakukho engingakuzamanga inkinga yami enkulu wukuthi indodakazi yami beyiphika ukuthi ithandana nalo thisha ngaleso sikhathi, kunzima ukuthi ngingathatha izinyathelo. Ngonyaka ka-2018, ngibizwe esikoleni kuthiwa ishaye omunye umfundi kwa grade 8, yacishe yamkhipha umphefumulo.
“Kuthe uma sekuhlalwa phansi kukhulunywa, kwatholakala ukuthi izingane zibanga yena lo thisha ngoba zombili zithandana naye,” kusho yena. Uthi ngelinye ilanga eyokhononda ngaye lo thisha, watshelwa ukuthi akukhulumayo ngaye akumele ngoba uthisha lona unabammeli. “Ngiyagula nje ngingena ngiphuma ezibhedlela ngenxa yempilo ebuthaka, nayo le ndaba yendodakazi yami eyenza ngingafikelwa nawubuthongo. Ngo-2020 iqede umatikuletsheni kulesi sikole yangaphasa kahle. “Ngonyaka odlule ibe isihlala ekhaya kodwa ibithi uma isifuna lo thisha wayo isho ngomhayizo esingawazi. Ngelinye ilanga ike yaphahluka yathi iyasaba ukuhlukana naye ngoba wathi akaliwa ungowakwaMhlabuyalingana,” kusho yena.
Lo mzali uthi ngawo u-2020 wathola ucingo luvela kuyena lo thi-sha emtshela ukuthi indodakazi yakhe isesibhedlela. “Ngaleso sikhathi yayenza umatikuletsheni. Ngathi uma ngifika esibhedlela, ngathola ukuthi ibizama ukukhipha isisu. Ngabe sengibuza yena lo thisha ukuthi ufuna ukuyibona ifile yini ingane yami, nokuthi yini emhlanganisa nayo aze angitshele ukuthi isesibhedlela. Wangilwisa wathi ubesiza,” kusho yena ekhihla isililo. Ngesikhathi ILANGA lihambele lo mzali. Uveze ukuthi indodakazi yakhe isikipite naye lo thisha use-yifake kwesinye isikole ngaphandle kemvume yakhe. “Mina ngizwe ngendodakazi yami ingicela ukuba ngiyithengele isikhwama sokuphatha izincwadi, ngangazi ukuthi izincwadi zani. Ngithe uma ngilandelela ngathola ukuthi ifunda kwesinye isikole. Nakhona lapho kangazi ukuthi ifike kanjani khona ngoba ngithe uma ngibuza kuyena uthisha, wathi uzama ukusiza mina.
“Ngiyaxakeka ukuthi ungisiza ndlelanike ngoba ingane yami useyonele ikusasa wayenza umfazi wakhe njengoba ngike ngafonelwa ngenye intombazane ingitshela ukuthi mangitshele indodakazi yami ihlukane nendoda yayo,” kusho yena. ILANGA libone ucingo lwakhe lo mfundi, okwathi ngesikhathi ehamba ekhaya eqa ebusuku elandwe nguye lo thisha, walukhohlwa. Kulolu cingo kunemiqhafazo ekhombisa ngokusobala ukuthi kade bathandana kanjalo nezithombe zakhe uthisha. Unina walo mfundi, uthi ngesikhathi esahlala nabo ubengasakudli nokudla kwakubo athi uma ekade ekulo isoka lakhe abuye aphethe okumnandi ILANGA likhulume nomunye umzali waseMachibini naye oke waba nendodakazi efunde kulesi sikole nothe wakhetha ukuyikhipha.
“Indodakazi yami iqale ngo-2018 ukuthi ilokhu ingibikela ukuthi ishelwa yilo thisha futhi kayiyithandi indlela akhuluma nayo ngayo. Kuke kwaba nosuku lapho ibuye esikoleni yavele yakhihla isililo yathi icela ngiyikhiphe kulesiya sikole. Ngoba bengingafuni iphazamiseke, ngiyikhiphile ngabe sengiyifaka kwesinye isikole,” esho. Ngesikhathi ILANGA liphenya ngalolu daba lihambele nomakhelwane bavuma ukuthi bayalwazi udaba lwakulesi sikole. “Yize noma lo thisha okhuluma ngaye kunguye igama lakhe elihamba phambili kodwa yisifo sakhona nje kulesi sikole ukuthi izingane zamantombazane bathandana nazo,” kusho omunye umakhelwane ongavumanga negama lakhe. Uze waveza ukuthi eyakhe ingane ifunda ugrade 10 esikoleni esikude, ngoba lesi sinegama elibi.
ILANGA liphinde laxoxa nowesifazane obethandana nalo thisha oveze ukuthi kuqubuke ingxabano phakathi kwakhe nesinqandamathe sakhe ngoMgqibelo wangomhla ka-12 kwephezulu esifica emzini esihlala kuwona nengane yesikole. ILANGA linanengxoxo ephakathi kwalaba bebanga le ngane yesikole abonakale ehleli nayo endlini enqunu lo thisha. Osondelene nowesifazane obethandana nalo thisha uveze ukuthi umngani wakhe wabona uthisha engazibambi izingcingo zakhe, wanikela lapho ehlala khona wafica imoto yakhe isegcekeni washaya isicabha ethi makavule. “Ube eseya ngasewindini lasendlini encane kanti uzodlula lo thisha ethi uyolunguza ukuthi ngubani lona ongqongqoza ngesankahlu. Ube esebona (lona wesifazane) ngomfaniswano obewunekiwe kulayini uwashiwe, wambuza ukuthi uyenzani ingane yesikole,” esho.
Kuthiwa lo thisha nasekuqaleni konyaka kuke kwasatshalaliswa izithombe zakhe, kukhalwa ngoku-thi useziqeqile izingane zesikole ezinkundleni zokuxhumana ekhasini okuthiwa yiMandeni Truth Commission. USihlalo wesigungu sabazali kulesi sikole uMnu Xolani Mathonsi, uvumile ukuthi kunodaba abalusebenzayo ngalo thisha. Uphinde waveza ukuthi maningi amahlebezi abawazwayo kodwa kakukho abangakwenza uma abazali bengababikeli ngokusemthethweni. Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Sihle Mlotshwa, uthe kubaluleke kakhulu ukuthi abazali basheshe bazisukumele izinto ezinjengalezi wanxusa nemiphakathi okwenzeka phambi kwayo le mikhuba ukuba ingathuli. “Kuyathusa uma imiphakathi ithula nodaba olubucayi kangaka noma abazali basabe ukukhuluma. Sizolandelela yonke imigudu efanele ukuphenya ngalolu daba, sifike esiphe-thweni. Othisha bayazi ukuthi kuyicala elibomvu ukuthandana nengane yesikole,” esho.
Previous articleLuyimpilo ucansi lwasekuseni
Next articleIsizwe sethulelwe inkosi yaso